फिल्ममा एक्सन हलमा सिठ्ठी बजाउन मात्र हो त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsफिल्ममा एक्सन हलमा सिठ्ठी बजाउन मात्र हो त ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली सिनेमामा एक्सन हिरो भनेर निखिल उप्रेती र विराज भट्टलाई मानिन्छ । तर, एक्सनकै कुरा गर्दा अभिनेता शिव श्रेष्ठ अझै अगाडि छन् । शिव श्रेष्ठलाई पनि नेपाली फिल्ममा एक्सनका राजा नभनिएको होइन । तर, विराज र निखिलले जस्तो एक्सनमा नाम उनको कम सुनियो ।
नेपाली सिनेमाले एक्सनलाई अंगालोको लामो समय भैसकेको छ । सिनेमामा एक्सन भएन भने खल्लो मान्ने जमात अहिले पनि उस्तै छ । झन् अहिले त साउथ सिनेमा युटुबमा हेर्ने जमातले नेपाली फिल्ममा पनि यस्तै फाइट खोज्ने गरेका छन् । तर, के नेपाली सिनेमाले एक्सनलाई न्याय गर्न सकेको छ त ? उड्नु, गुड्नु, हाम फाल्नु, एकैपटकमा दर्जन गुण्डालाई सखाप बनाउनु मात्र एक्सन हो त ?
नेपाली फिल्मको एक्सनको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा त्यो अघि एकपटक साउथ र भारतीय सिनेमाको कुरा गरौ, जसबाट नेपाली फिल्म बढी प्रभावित छ । दर्शकलाई हिरोले आएर खलपात्रलाई कुटेर मात्र एक्सनमा ताली बज्दैन ।
कुटाई खाइरहँदा, हिरोइनको रेप हुने बेलामा हिरो आउने र बचाउने कुराले मात्र दर्शकको मन छुदैन । यसका लागि सिनेमा भित्र कथा पनि बग्न जरुरी छ । तर, नेपाली सिनेमामा एक्सन प्रयोग गर्दा यी सबै कुरा विर्सिन्छ । अभिनेता निखिल उप्रेती र विराज भट्टले थुप्रै सिनेमामा काम गरे, जसमा उनीहरुले उडेर, गुडेर फाइट गरे ।
तर, निखिलको पहिलो सिनेमा पिजडाको मात्र दर्शकलाई याद छ । कारण, निखिलको एक्सनमा सिठ्ठी त बजेको थियो तर दर्शकको मन छोएन । दर्शकले सिनेमाको हलबाट बाहिर निस्किएपछि त्यो कुरा विर्सिए । नेपाली फिल्ममा यूवाहरु आएपछि एक्सनको भाषा बदलिएको छ । अहिले एक्सनको अर्थ उड्नु र गुड्नु मात्र छैन ।
तर, सिनेमाले एक्सन मात्र पाउँदा कथा विर्सिएको छ । जसले दर्शकलाई हिरोले उडेर भिलेनलाई कुट्दा पनि दिक्क लाग्ने अवस्था छ । अभिनेता अनमोल केसीले शरीर बनाएर, एक्सन सिकेर कृमा अभिनय गरे । यो सिनेमामा उनको द्धन्द्ध गजबको छ ।
तर, सिनेमाले कथा विर्सियो । यस्तो उदाहरण खुबै छन् । नेपाली फिल्ममा जन्मिएका नयाँ अभिनेताहरुले एक्सनमा पनि आफूलाई अब्बल बनाउन खोजेका त छन् तर सफल भएका छैनन् । अभिनेता सुशिल सिटौला अभिनित सिनेमा रणवीरको ट्रेलर आजैमात्र रिलिज भयो ।
यो सिनेमाको ट्रेलरमा एक्सन नै एक्सन छ । चन्द्र पन्तले लामो समयपछि एक्सनमा केही दम देखाएका छन् । यदि, सिनेमाको ट्रेलरमा देखाइएको एक्सन मात्र सवथोक हो भने त केही भन्न नसकिएला, तर कथावस्तु पनि राम्रो छ भने यो एक्सनले काम गर्न सक्छ ।
नेपाली फिल्मले पहिले जस्तो एक्सन बोल्न छाडेको छ । अहिले कमेडी बढी बोलिन्छ । तर, एक्सन बिषयमा बनेका राम्रा सिनेमाले दर्शकको मन जितेका छन् । अहिलेको जमानामा सिनेमामा हिरो उड्दैमा दर्शक दंग पर्दैनन् ।
तर, हिरोलाई उडाउनु अघि त्यसको सही तर्क दिन सिनेमाले सक्यो भने दर्शक फेरि खुशी हुन्छन् । सिनेमाका लागि एक्सन सबैभन्दा ठूलो मसला हो । एक्सन भरपुर भएकै कारण होला, निर्माताले आफ्नो सिनेमालाई मसला सिनेमा भन्ने गरेका छन् । तर, कथा बेगरको एक्सनको पनि काम छैन । सिनेमामा एक्सन आवश्यक छ, तर विनाकारणको झगडामा दर्शक रमाउन सक्दैनन् ।